हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले असार भित्रै उद्घाटन गर्ने, २०८० सालमा ३ अर्बको आइपिओ ल्याउने तयारी – Himalayan Reinsurance
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले असार भित्रै उद्घाटन गर्ने, २०८० सालमा ३ अर्बको आइपिओ ल्याउने तयारी
काठमाडौं । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पाएको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले असार भित्र उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको छ । बीमा समितिले ४५ दिन भित्र संस्थापकहरुलाई ७ अर्ब रुपैयाँ पूँजी जुटाउन निर्देशन दिए पनि कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै पुनर्बीमा व्यवसाय शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीले यहि असार भित्रै उद्घाटन गर्ने तयारी गरिरहेको कम्पनीका संस्थापक तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए ।
कम्पनीले पूँजी जुटाउने सँग सँगै कम्पनी सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने पुर्वाधारको पनि तयारी गरिरहेको छ । कार्यालय स्थापना गर्नेदेखि लिएर आवस्यक जनशक्ति भर्ती गर्नेसम्मका कामहरु अगाडि बढिरहेको छ । हिमालयनको अध्यक्ष बन्नका लागि शेखर गोल्छाले युनियन लाइफको सञ्चालक पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । उच्च व्यवस्थापनमा भने को को रहने भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
कम्पनीले यदि असार भित्रै पुनर्बीमा व्यवसाय शुभारम्भ गरेका खण्डमा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मै प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न सक्नेछ । प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि कम्पनीले एक आर्थिक वर्षको साउन एक गतेदेखि असार मसान्तसम्मको लेखापरिक्षण गर्नु पर्छ । यदि साउन एक गते मात्रै उद्घाटन भयो भने पनि कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि अर्को आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नु पर्छ । त्यसैले गर्दा कम्पनीले असार महिना भित्रै बीमा समितिबाट अनुमति लिएर पुनर्बीमा व्यवसाय शुभारम्भ गरिसक्नु पर्छ ।
त्यसैले गर्दा कम्पनी यहि असर भित्रै व्यवसाय शुभारम्भ गर्ने तयारीमा जुटेको हो । कम्पनीले नियम अनुसार सम्पुर्ण प्रकृयाँ पुरा गरिसके पछि बीमा समितिले निरिक्षण गर्ने र व्यवसायका लागि अनुमति दिने अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।
समितिले हिमालयनलाई जेठ १७ गते लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो । समितिबाट लाइसेन्स पाए सँगै कम्पनीले जेठ २३ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो ।
कम्पनीले चुक्ता पूँजी १० अर्ब हुने जनाएको छ । १० अर्ब मध्ये संस्थापकहरुको तर्फबाट ७ अर्ब र बाँकी ३ अर्ब सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गर्नु पर्नेछ ।
यस कम्पनीमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वर्तमान तथा निवर्तमान गरि तीन जना अध्यक्ष रहेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा र पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको लगानी रहेको छ । त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका वर्तमान अध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका सतिश मोर, शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल, के.एल. दुगड ग्रुपका विकास दुगड, एम.भी. दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, लक्की ग्रुपका रोहित गुप्ता लगायतको लगानी रहेको छ । त्यस्तै दुई सरकारी बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको लगानी रहेको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको पनि ५० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
शंकर ग्रुपका साहिल र सुलभ अग्रवालको लिडिङ सेयर रहेको छ । यसमा हाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको सुशील भट्टका दाजु दीपक भट्टलगायतको समूहको पनि लगानी रहेको छ ।
Source : https://insurancekhabar.com/2021/06/116052/